Soo dejisan DU Speed Booster 2.9.8.6 – Vessoft
Soo dejisan DU Speed Booster
Du Speed ​​suunka – software ah in ay tayadoodii nidaamka iyo qaab gaaro ugu weyn ee hawlgalka qalabka. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah falanqaynta iyo baadhista qalab iyadoo la kaashanayo oo mid ka saari kara geedi socodka in mashquulin meel xusuusta waaweyn. Du Speed ​​talala oo ku jira qalab si aad u nadiifiso khasnado nidaamka, ka saar codsiyada iyo meel ay yaalaan lagu rakibay, hubi xawaaraha internet-ka iwm software wuxuu kuu ogol yahay in la hagaajiyo habka ciyaarta iyo hawlgal ka mid ah codsiyada qaar ka mid ah iyada oo ah dhammaystirka codsiga shaqeeyaan ee asalka ah. Sidoo kale du Speed ​​talala oo ka mid ah scanner antivirus ku siinaya difaac qalab ka dhanka ah hanjabaado kala duwan oo ay ka.
Scanning oo ayna meel bannaan xasuusta
Management ee hab socda iyo codsiyada lagu rakibay
Dardar ee gameplay ah iyo hawlgal codsiyada
Nadiifinta khasnado oo ka mid ah codsiga iyo nidaamka
Joogitaanka scanners virus
DU Speed Booster Software la xiriira:
English, Español, Português, Italiano... Truecaller 6.01